Sense yesainzi uye tekinoroji ndiye mutakuri wehunyanzvi anoratidza vanhu kushuvira ramangwana.Plume Dhijitari Piano, ndeyekuona mifananidzo nepfungwa yesainzi uye tekinoroji.Kubva pakuchinja kweshoko kusvika pakuwedzeredzwa kwepfungwa, mazuva ano, Plume Akangwara Piano inova isingadzivisike tsika Mufashoni nhepfenyuro yePlume Piano, ita kuti vanhu vanoda mimhanzi vanzwe kugunzva uye simba kubva pamoyo mumaonero akasiyana. Sezvisati zvamboonekwa.Ngatisunungurei pamwechete.
Yedu Plume Dhijitari Piano YY-DJ04 inoshandisa yepakati kusvika pakakwirira-giredhi Pvc sechinhu chiri pamusoro, zvese zvakanyatsopedzwa uye zvine hunyanzvi kuveza zvinoita kuti iwe ushamisike iri piyano kana chidimbu chemifananidzo yakanakisa.
Uye zvimwe zvekuzvirumbidza pamusoro pedu piyano ndiyo yepakati kusvika kune yepamusoro-giredhi 88 noti yakajairwa sando -action keyboard. Izvi zvitsva zvinosiyana piyano yedu kubva kune yekare uye yakaomarara magetsi keyboard, gonesa zvigunwe zvako zvaunobata uye unzwe mutinhimira wenziyo.
Tekinoroji ikozvino yasvika pamusoro pekusimudzira zvachose kurira kwemhando dzakakurumbira dzeyakajairwa acoustic piano, ichiita kuti tikwanise kukuunzira yedu Plume YY-DJ04 nepakati kusvika padanho repamusoro-giredhi redhiyo sosi. Zvese zvese zvezwi rinonzwika rinouya kubva kune yakajairwa piyano zvinogona kusimudzirwa neyedu yedhiano piyano uye wozounzwa kwauri.
Yedu piyano piyano ine zvakare 2 20W yepakati kusvika pakakwirira-giredhi kumisikidza inova yakanaka stereo gudzazwi.
Iine 32 polyphony, 140 tones uye 128 mutinhimira, iyi piyano hapana mubvunzo isimba-rine simba rakasiyana-siyana muchina unoita kuti iwe ugadzire dzinoyevedza nziyo.
Pamusoro Materia Pakati kusvika Kumusoro-giredhi PVC
Yekhibhodi Pakati kusvika Kumusoro-grade88 Cherechedzo Yakajairwa Hammer-chiito Khibhodi
Inzwi Rinobva Pakati kusvika Kumusoro-giredhi Dhijitari Inobva Sosi
Stereo gudzazwi Pakati kusvika Kumusoro-giredhi Kugadziridza 20W * 2
Nyanga Pakati kusvika Kumusoro-giredhi Dual Channel Yakakwirira Kuvimbika Nyanga 8 Q
Inowanikwa MIDI, Stereo Mahedhifoni, USB, DC 18V Magetsi
Simba rekubuda 20W * 2
Mamwe Mabasa Yekhibhodi yakasimba kudzora, MP3 player, Metronome
Divi L1350 * W345 * H740mm
Pashure: Plume Dhijitari Console Piano YY-03
Zvadaro: Plume Dhijitari Console Piano YY-DJ08
Dhijitari Yakatwasuka Piano, Magetsi Grand Piano, Smart Piano Khibhodi, Yakaderera Mutengo Dhijitari Piano, Magetsi Akarurama Piyano, Dhijitari Piano Kugadzirisa,